ပြန်ရည်ကြောဖောရောင်ခြင်း - Hello Sayarwon
Lymphedema ( ပြန်ရည်ကြောဖောရောင်ခြင်း)
Lymphedema ဆိုသည်မှာ ပြန့်ရည်ကြောစနစ် စီးဆင်းမှု့ မမှန်ခြင်းကြောင့် ခြေ/ လက်များ အစုံလိုက်သော်၎င်း၊ တစ်ဖက်ခြင်း သော်၎င်း ဖောခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြန့်ရည်ကြောစနစ် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ပြန့်ရည်ကြောစနစ်ဆိုသည်မှာ ပြန့်ရည်ကြောများကို ခန္ဓါကိုယ် တစ်ခုလုံး ကွန်ရက်သဖွယ် ဆက်သွယ်ထားခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ယင်းစနစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တစ်ရှူးများတွင် ပိုလျံနေသော အသားဓါတ်နှင့် အဆီဓါတ်၊ အခြားစွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ယင်းပြန့်ရည်များကို ပြန့်ရည်ကြော အဖုများသို့ သယ်ဆောင်ပေးပြီး စွန့်ပစ်အဆိပ်အတောက်များနှင့် ရောဂါပိုးမွားများကို lymphocytes များ၏ အကူအညီနှင့် တိုက်ဖျက်ပါသည်။ ထို့သို့ lymphocytes များမှ ရှင်းလင်းပြီး ကျန်သော အကျိုးပြုဓါတ်များကို သွေးကြောထဲသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ သို့သော် အကြောင်းရင်း တစ်ခုခုကြောင့် ယင်းပြန့်ရည်ကြောများ ပိတ်ဆို့နေပါက ယင်းပိတ်ဆို့သော နေရာတွင် ဖောနေခြင်း (Lymphedema) ဖြစ်တတ်ပါသည်။
Lymphedema ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများကို ဖော်ပြပါ။
သင့်၏ ပြန့်ရည်ကြောစနစ်သည် သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ Lymphedema ဖြစ်စေသော အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ပြန့်ရည်ကြော အကျိတ်ကို ကင်ဆာကြောင့် ခွဲစိတ်ဖယ်ရှာခြင်း၊ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ရပါသည်။
Lymphedema ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများတွင် မူလ အကြောင်းရင်းနှင့် တစ်ဆင့်ခံ အကြောင်းရင်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ မူလအကြောင်းရင်းမှာ ပြန့်ရည်ကြောစနစ် ပုံမမှန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရပြီး တစ်ဆင့်ခံ အကြောင်းရင်းသည် အခြားသောရောဂါ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဆင့်ခံ အကြောင်းရင်းများသည် Lymphedema ၏ အဓိက ဖြစ်စေသော အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
မူလအကြောင်းရင်းသည် ခန္ဓါဗေဒ ဆိုင်ရာပုံမမှန်ခြင်းနှင့် မျိုးဗိဇဆိုင်ရာ ရှားပါပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
တစ်ဆင့်ခံ အကြောင်းရင်းများသည် ပြန့်ရည်ကြောများနှင့် ပြန့်ရည်ကြော အဖုများကို ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် ပိတ်ဆို့စေခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ အားလုံးပါဝင်ပါသည်။ ယင်းအကြောင်းရင်းများမှာ
ကင်ဆာရောဂါ။ ကင်ဆာဆဲလ်များသည် ပြန့်ရည်ကြောများကို ပိတ်ဆို့စေခြင်းကြောင့် Lymphedema ဖြစ်စေပါသည်။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း။ ပြန့်ရည်ကြော အဖုများနှင့် ပြန့်ရည်ကြောများကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း/ ခွဲစိတ်နေစဉ် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းများကြောင့်လည်း Lymphedema ဖြစ်စေပါသည်။
ကင်ဆာဓါတ်ကင်ကုသခြင်း။ ဓါတ်ကင်ကုသခြင်းသည်လည်း ပြန့်ရည်ကြော အဖုနှင့် ပြန့်ရည်ကြောများကို ထိခိုက်ပျက်စီး စေပါသည်။
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း။ ပြန့်ရည်ကြော အဖုများကို ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း နှင့် ကပ်ပါးပိုးများကြောင့်လည်း ပိတ်ဆို့စေပါသည်။ (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အဖြစ်အများဆုံးမှာ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ဖြစ်ပါသည်။)
Lymphedema ဖြစ်နေသော ခြေ/လက်သည် အောက်ပါ ရောဂါ လက္ခဏာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းများအပါအဝင် ခြေ/လက် အစိတ်အပိုင်းများ ဖောခြင်း
ခြေလက်များ လေးကွေးခြင်း၊ တင်းကျပ်ခြင်း
အဆစ်များ လှုပ်ရှားနိုင်မှု့ အားနည်းလာခြင်း
နွေးနေခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ ယားယံခြင်း
ကိုက်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းနှင့် တင်းကျပ်ကျပ် ဖြစ်နေခြင်း
အဆစ်အမြစ်များ ကွေးဆန့်ရ ခက်လာခြင်း
Lymphedema ပိုမို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ
ကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာကုသမှု့များသည် ပိုမိုဖြစ်စေသော အကြောင်း ရင်းများဖြစ်ပြီး အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ခြင်း၊ rheumatoid နှင့် psoriatic အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်းနှင့် အဝလွန်ခြင်း တို့ကြောင့်လည်း Lymphedema ပိုမိုဖြစ်ပွား စေပါသည်။
Lymphedema ကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်သော နည်းလမ်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် ရောဂါလက္ခဏာများကို ဂရုပြုခြင်းဖြင့် ရောဂါကို စောလျင်စွာ သိနိုင်ပြီး ဆိုးရွားသော အခြေအနေမရောက်မီ တားဆီးနိုင်ပါမည်။
Lymphedema http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lymphedema/basics/complications/con-20025603. Accessed 10 November, 2016
Lymphedema – Topic Overview http://www.webmd.com/a-to-z-guides/tc/lymphedema-topic-overview#1. Accessed 10 November, 2016
Lymphedema http://www.medicinenet.com/lymphedema/article.htm. Accessed 10 November, 2016